पहिलो प्राथमिकता भनेकै नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, आफू पनि सुरक्षित रहने हाम्रो धारणा छ , विशेषगरी नगरपालिका र अन्य सुरक्षा समितिसँग समन्वय सोहि अनुसार अघि बढेका छौ । - kageshworikhabar.com
पहिलो प्राथमिकता भनेकै नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, आफू पनि सुरक्षित रहने हाम्रो धारणा छ , विशेषगरी नगरपालिका र अन्य सुरक्षा समितिसँग समन्वय सोहि अनुसार अघि बढेका छौ ।
१७ भाद्र, काठमाडौँ । अहिले सबैको ध्यान कोरोना महामारीले तानेको छ । संक्रमण फैलदै गएको छ । कोरोना महामारीले गर्दा विकास निमार्णका काम ओझेलमा परेका छन् । काठमाण्डौको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा ८ मा कोरोना संक्रमण विरुद्धका कार्यक्रमसँगै विकास निर्माणका काम पनि भैरहेका छन् । वडा ८ मा मुख्य गरी सडक, सार्वजनिक यातायात र पुल मुख्य योजनामा परेका छन् । वडाका विकास निर्माण र समसामयिक गतिविधिबारे वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण चाँपागाईसँग कागेश्वरी खबरका सहकर्मी कबिता चाँपागाईले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा छ, वडामा संक्रमण थप रोग फैलन नदिन कार्ययोजना के छ ?
पहिलो प्राथमिकता भनेकै नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, आफू पनि सुरक्षित रहने हाम्रो धारणा छ । त्यसै अनुसार नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न के गर्नुपर्छ भनेरै ध्यान दिएका छौ । सकेसम्म वडाबासीलाई अनावश्यक काममा बाहिर नहिड्न आह्वान गरेका छौ ।
बाहिर हिड्दा मास्क र भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने खालका विभिन्न कोरोनाविरुद्धका जनचेतनामुलक कार्यक्रम ल्याएर सुचना प्रवाह गरेका छौ । विकास निमार्णका काममा खटिने कामदारहरुको लागि परिक्षण पश्चात् मात्र सहभागि गराउने हाम्रो नीति छ । विशेषगरी नगरपालिका र अन्य सुरक्षा समितिसँग समन्वय सोहि अनुसार अघि बढेका छौ ।
लकडाउनका बेला राहात वितरण कसरी गर्नुभयो ? के कस्ता समस्याहरु खेप्नुपर्यो ?
वडा ८ मा अन्य वडाको तुलनामा राहत बाँड्ने काम धेरै भए जस्तो लाग्छ । निक्कै झमेला पनि खेप्नुपर्यो । जसलाई राहतको खाँचो थियो उहाँहरुलाई राहत दिदा अरु नागरिकले पनि पनुपर्ने अधिकार झै सम्झेर झैझगडा गर्नुहुन्थ्यो । तर पनि हामीले उहाँहरुको कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर कुपनको माध्यमबाट राहत लिन आउनेहरु कोही पनि नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले वितरण गरेका थियौ । साथै खाना वितरण पनि गरेका थियौ ।
यो तत्कालिन अवस्थाको लागि थियो र पछि राहतको लागि रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले केहि योजनाहरु पनि ल्याएका थियौ त्यो सिमित समयको लागि थियो । अब अवस्था के हुन्छ त्यसै अनुसार अगाडी बढ्नुपर्छ ।
वडाभित्र स्वास्थ्य संरचना र अवस्था के छ ?
यो वडामा पहिला शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक थिएन । हामीले यहाँको अवस्था र मागलाई ध्यानमा राखेर एउटा भवन निमार्ण गर्नको लागि टेण्डर पारिसकेका छौ । जुन तिव्र गतिमा काम भैरहेको छ, छिट्टै सम्पन्न गर्ने योजना छ । अहिले आधारभुत स्वास्थ्य उपचारको लागि कोठा भाडामा लिएर सेवाप्रवाह गरीरहेका छौ । साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको योजना तथा कार्यक्रम भने ल्याइरहेका छौ ।
अध्यक्ष्यज्यू, तपार्इं जनप्रतिनिधि भएको ३ वर्षमा बित्यो, मुख्य उपलब्धिहरु के भए ?
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अन्र्तगत दैनिक रुपमा सञ्चालन गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । सामाजिक, व्यवहारीक र कानुनी रुपमा आईपर्ने कुराहरुलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सम्पादन गर्ने र नसकेका कामहरु माथिल्ला निकायहरुसँग समन्वय गरेर गर्ने गर्दछौ । हाम्रो यस कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यसवर्ष १ करोडको बजेट विनियोजित गरेकोमा सोही अनुसारकै कामहरु भैरहेका छन् ।
हामीले यस वडामा नागरिकहरुको आवश्यकता र चाहनाहरुलाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाएका छौ । आफु जनप्रतिनिधि भैसकेपछि धेरै कामहरु गर्छु भनेर आएका हौ, हामीले बिर्सिनु हुँदैन । यसै अनुसार सबैभन्दा पहिला वडाबासिको चाहना र सुविधालाई ध्यानमा राखेर हामीले तेज विनायक चोकमा कार्यलय राखेर विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएका छौ ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ के कस्ता काम भएका छन् ?
हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले दुई वटा स्कुल एउटा आधारभुत विद्यालय र अर्काे माध्यामिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गराएका छौ । आधारभुत विद्यालय रहेको भवन लामो समय देखि बाटो कै छेउमा रहेको र करिब ५ आनाको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको थियो । यसैगरी विद्यालय चलेपनि व्यवस्थित भने थिएन । बच्चाहरु जस्ताको टहरामा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । त्यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थिति भएकोले त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रकृयामा छौ जुन वालपिठ मार्गमा रहनेछ ।
अर्काे तेज विनायक माध्यामिक विद्यालय जुन २०१७ सालमा स्थापना भएको थियो । यो विद्यालय पनि तेज विनायक चोक मै रहेको थियो । यस विद्यालय व्यवस्थित नभएकोले विद्यार्थीहरुलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले पशुपति विकास कोष नजिकै रहेका १७ रोपनि जग्गामा सारेर अध्यापन गराउने भएका छौ ।अहिले विल्डिङ बनाएर स्कुल सञ्चालन समेत भइसकेको छ।
अन्य संस्थागत विद्यालयहरुमा पनि उहाँहरुसँग सहकार्य गर्दे विद्यालय के कसरी चलेको छ, के कस्ता कामहरु गर्नुपर्नेछ, अभिभावकको चाहना के छ, जेहेन्दार र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल गरी अगाडी बढ्ने योजना छ । पुर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ले विद्यालयको काम पहिला सक्नुपर्छ भनेर जोड गरिरहनुभएको छ । नगरपालिका र माननिय ज्युको कोषबाट झण्डै ४ करोड जतिको काम भएको छ ।
खानेपानीको चर्को समस्या हल गर्न के भैरहेको छ ?
वडाभित्र गोठाटार भैमाल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन भएको छ । जस्ले वडा ७, ८ र ९ मा खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । पहिला खानेपानीको सर्वे भएपनि बस्तीको आँकलन अनुसार सार्वजनिक धारो राख्ने काम भयो । तर अहिले बस्ती बढ्दै गयो । त्यो पानीले पुग्ने अवस्था भएन ।
अहिले सरकारले ७० प्रतिशत र नगरपालिकाबाट ३० प्रतिशत खर्च गरी अरु सह लगानीमा जाने योजना भइरहेको छ । खानेपानीतर्फको अर्को योजना शिवचोकबाट कृष्ण मन्दिरसम्मको बस्तीमा पाईप विस्तारका काम भइरहेका छन् । त्यहाँ सुन्दरीजलको पानी ल्याउने गरी तयारी छ ।
कृषि तर्फ के कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु छन् ?
यस वडामा विभिन्न कृषि सहकारी संस्थाहरु छन् । यी संस्थाहरुले कृषिमा आधुनिकिकरण ल्याउने, तालिम दिने र सिप हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरु दिईरहेको छ । यस वडामा कृषिको लागि भनेर कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।
खेलकुद सम्बन्धि काम के भए,के हुँदैछन् ?
वडा ८ मा खेलकुद मैदान नभएको अवस्थामा आवश्यकता ठानिएको छ । जसले गर्दा पशुपति विकास कोष नजिकै भएको जग्गाबाट केहि भाग छुट्याएर एउटा मैदानको परिकल्पना गरिरहेका छौ । युवा वर्गको चाहना र आवश्यकतालाई बुझ्दै यो काम हामी छिटो सक्नुपर्ने देखिन्छ । यी बाहेक अतिरिक्त्त क्रियाकलापहरु जहाँ स्कुल स्कुल बिच विभिन्न चेस प्रतियोगिता, टेबल टेनिस, तेक्वान्दो, बक्सिङ जस्ता आयोजनाहरु भइरहेका छन् ।
यी आयोजनाको लागि मैदानको आवश्यकता पर्ने हुनाले छिटो विकास गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौ । जसका लागि हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौ । र जो कोहीले पनि फुटबल, भलिबल क्रिकेट जुनसुकै क्षेत्रमा जान्छु भने पनि यस वडाको तर्फबाट आर्थिक, सामाजिक र मनोबल बढाउने जस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।
वडाका अरु समस्याहरु के कस्ता पहिचान गर्नुभएको छ ?
यस वडामा समस्याकै रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । अन्य ठाउँ भन्दा पनि चाबहिल नयाँ वसर्पाक जानको लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । किनकि विद्यार्थीहरुलाई कलेज जान आउन निकै समस्या परेको छ र गोठाटारमा रहेको पहेँलो पुल निकै साँघुरो भएकाले त्यसलाई मर्मत गर्दै अर्काे एउटा मान्छे हिड्ने पुल बनाउन निमार्ण प्रकृयामा गइसकेका छौ, जुन अशोज देखि बन्न सुरु गर्ने योजना भएको छ ।
वाग्मतीसँग यस वडा जोडिएको हुनाले कृष्ण मन्दिर जान सर्वसाधारणलाई कष्ट पर्ने हुनाले त्यहाँ पुग्नको लागि एउटा पुल बनाउनु पर्नेछ । जसका लागि संघिय सरकारले बजेट छुट्याएको छ । त्यो पुल भत्कीरहेको हुनाले मोटरसाईकल र मान्छे हिड्ने छुटाछुटै पुल निर्माण गरिनेछ । पुल व्यवस्थापन भइसकेपछि वाग्मती गोरेटोका कामहरु विवादमा परिरहेका छन्, ती सम्पुर्ण काम सकिएपछि सार्वजनिक यातायात सहज हुनेछ ।
विकास निर्माणको कार्यमा नागरिकको सहयोग र भूमिका के छ ?
वडाबासीप्रति म निक्कै आभारी छु किनकी उहाँहरुको साथ सहयोग नपाएको भए हामी एक्लैले केहि पनि गर्न सक्दैनौ । उहाँहरुले भुकम्प जादा बढि क्षति भएको घर परिवारलाई विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्नुभयो साथै अहिलेको कोरोना महामारीमा खाना खान गह्रो परेको घरपरिवारलाई आफ्नै लगानीमा खाना खाने कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो ।
उहाँहरुले यस नगरपालिकाममा कहाँ केकस्ता कामहरु गर्नुपर्ने हो र कस्ता ठाउँहरुमा तत्काल काम गरिनुपर्ने हो भनि हामिलाई जानकारी दिनुहुन्छ, जसले गर्दा काम गर्न निकै सजिलो हुन्छ ।
नागरिकका अन्य माग र आवश्यकताबारे तपाईंले के सोच्नु भएको छ ?
स्थानिय बासिन्दाहरुको हरेक मागलाई पुरा गर्न नसकिएता पनि अत्यावश्यक मागहरुलाई तत्काल पुरा गर्ने कार्य भइरहेको छ । हाल यस वडामा नागरिकले गरेको माग अनुसार आवश्यक परेको ठाउँहरुमा सामुदायिक भवनहरु, जेष्ठ नागरिक भवन, किरियापुत्रि भवन, चौताराहरु बनाउने र क्लबको लागि भवन बनाउने कार्य भइसकेको छ । साथै अन्य मागहरु लाई सकेसम्म छिट्रटै पुरा गर्ने योजना छ ।
आफुलाई महशुस भएको र गर्न नसकेका केहि कामहरु छन् ?
यतिको ठाउँमा पनि हामीले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौं । जसले गर्दा जेष्ठ नागरीक र विद्यार्थीहरुलाई असर परिरहेको छ । यसलाई समाधान गर्न लाग्दा लाग्दै पनि छिटो हुन नसकेको कुराले एकदमै चिन्तित छु । यस विषयलाई लिएर हामी दिनरात लागि परेका छौ ।
वडाले धार्मिक, सांस्कृतिक तर्फ के कस्ता कदमहरु चालेको छ ?
हामीसँग भएको वस्तुस्थिति, पुराना जात्राहरु, पर्वहरु जसलाई कसरी जर्गेना गर्ने भनेर पुर्वाधार विकासतर्फ नै जोडेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौ । यहाँ भएका मठ मन्दिरलाई बेलाबेलामा सरसफाई गर्ने, वृद्ध वृद्धाहरुलाई सम्मान कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ? नागरिकको असंतुष्टि देख्नुभएकै छ ।
कोरोना महामारीको यो बेलामा विकास निर्माणका काम तिव्र गतिमा नभए पनि काम भने रोकिएको छैन । वडा ८ मा गोरेटो बाटोलाई विस्तार, ढलको व्यवस्थापन, कतिपय ठाउँमा आवतजावतको समस्या छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ढल व्यवस्थापन नगरी अन्य बाटोका पुर्वाधारहरु विकास गर्न नपाएको अवस्था छ ।
पछि ढल व्यवस्थापन गर्दा पुन बाटो भत्काउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा यदि ढल छैन भने त्यो बाटोलाई कालो पत्रे नगर्ने, सानो छ भने त्यसलाई विस्तार गर्ने कार्यहरु भइरहेका छन् । सुशान्ति मार्ग र फिकल मार्गको काम भएको छ । अहिले वर्षाको समय र कोरोनाको महामारीले गर्दा काममा ढिलासुस्ती पक्कै भइरहेको छ ।
Previous articleसम्भव छ घर घरमै रोजगारी : कृषि फार्म र दुध संकलन तथा वितरण गर्दै आएका प्राणनाथ फुयालको अनुभव
Next articleतीन बस्तीको बीचमा रहेको ढुङ्गाले जोखिम बनाएको बस्तीको स्थानान्तरण थालियो
स्थानीय बजारमा सुनकाे मूल्य ५०० ले वृद्धि
ओलीको राजीनामा माग्ने प्रचण्डको योजना